Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. waxay si diiran u soo dhaweyneysaa macaamiisha Rwanda inay soo booqdaan
Hebei Lihua Pharmaceutical waxay si firfircoon uga jawaabtaa siyaasadda qaran ee "Belt and Road" waxayna si xoog leh u ballaarisaa suuqyada dibedda ee Afrika. Subaxnimadii Abriil 22, macmiilka reer Rwanda kabahizi wuxuu u yimid shirkadeena si uu u soo booqdo ugana hadlo arrimaha iskaashiga. Maareeyaha guud ee ...
Barnaamijka Ka Hortagga iyo Xakamaynta Qandhada Doofaarka ee Afrika, Barnaamijka Sayniska Cilmiga Beeraha ee Shiinaha (2018-2022)
2019 Nian 5 Yue 24- Ri, Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska Cilmiga Beeraha warbixin kooban oo ku saabsan horumarka baaritaanka ayaa ku dhawaaqay "barnaamijka kahortaga iyo xakameynta qandhada doofaarka ee Afrika". Kadib dhacdadii cudurka faafa ee doofaarka Afrika, Akadeemiyada Shiinaha ee Cilmiga Beeraha t ...
Carwadii 125aad ee Soo Dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha, Hebei Lihua Pharmaceutical Industry Co., Ltd. ayaa dib ula soo noqotay iyadoo xamuul buuxa!
2019 Nian 5 Yue 1 maalin -5 th, 125 th Shiinaha Import iyo Dhoofinta Carwada lagu qabtay Xarunta Bandhigga Guangzhou Pazhou. Dhacdo ganacsi oo caalami ah, aagga dhoofinta ee bandhiggan wuxuu ku lug leeyahay dharka iyo dharka, shandadaha, dhaqanka iyo isboortiga, cuntada, agabka caafimaadka iyo dhexdhexaadinta ...
Cinwaanka: Beerta Warshadaha ee Shijiazhuang Xinle